Aaway waxgaradkii Soomaaliland
Saladiintii, boqoradii, culimadii, warbaahintii marka laga reebo Raaqiya Omaar iyo sharciyaqaanada xira dhamaantood waa aamuseen. Ma riyaale ayaa sidaas looga baqaa? ma fikradda gabadha 16 jirka oo aan hubaysnayn inay qatar ahayd bay aaminsan yihiin? Ma kufiga gabadha sheegatay baanay ka danqanayn lama oga.
Dhaqanka Soomaalida iyo diinta Islaamkaba waa wax xun in gabar 16 jir ah la fara xumeeyo ama lagu tilmaamo argagixiso ayadoon wadan qori. Arrinta meesha ka dhacday waa ceeb waxaase ka sii daran aamusnaanta shacabka reer s/land. shaqo iskuma leh difaaca s/land iyo difaaca gabadhan yar waayo difaaca gabadhan yar waa waajib saaran qofkasta oo xilkas ah, Waxaa la isweydiinayaa waxa helay shacabkii s/land waxgaradkoodii.
Xukuumadda Riyaale waxaa lagu eedeeyey inuu soo tarxiilay Hawiye, ogaadeen u dhiibay Ethiopia, laascsanood ku soo duulay si uu u bililiqaysto ama u helo aqoonsi caalami ah ilaa hadda wax beenin ama rumayn ah kama soo yeerin xukuumadda Riyaale iyo waxgaradka s/land waxa keliya oo u hadlaa waa wiilal yar yar oo ismagacaabay sida Dirir dhaba oo dhib keliya u soo jiido tolkii waayo wax celiyo ama borotakool baro ma leh.
Arrinta Samsam waa ceeb dusha ka saaran waxgaradka Soomaaliland, Soomaalida kale kama aamusteen qalad intaas la eg. kufsi ama xarig gabar yar oo 16 jir Soomaaliyeed ah in lagu tilmaamo argagixiso waa waa qalad oo aan ka hari doonin s/land haddii aanay ka dhiidhiyin. amuska waxaa lagu tiriyaa ogolaansho ama ka raali ahaansho. waxgaradka Soomaaliland waa inay ka dhiidhiyaan arrinta Sam Sam oo ku qasbaan Riyaale inuu siidaayo caruurta raali gareeyo magdhowna siiyo. Gabar 16 ah oo aan hubaysnayn in laga baqaa waa paranooya iyo cabsi weyn ee waa in la dersaa xukuumadda s/land waxa cabsida intaas la eg ee dunida gaar ahaan xuquuqal insaanka kuwa u dooda fahmi la yihiin.
waxgaradkii S/landow aamuska waa maxay - sida isu dhaama.